Satọdee meteosat: njirimara, ojiji na mkpa | Netwọk Mgbasa Ozi
Portillo nke German | | Ngwaọrụ gbasara ihu igwe
Ka ọ dị ugbu a, enwere mkpawanye ọha mmadụ n'ihi mmata nke ihe omume dị iche iche na nsonaazụ ndị na-akpata ajọ ihe okike. A kọwara ya na mmasị zuru oke n'ihe metụtara gburugburu ebe obibi. Ihe a niile na - enweta ihu ọma site na mgbasawanye nke ozi ihu igwe site na ọtụtụ nkesa nkesa n'ụwa niile. Na satịlaịtị meteosat Enwere ike inweta onyonyo site na sensọ arụnyere na nkọwa zuru oke nke nwere ike inye anyị nnukwu ozi gbasara mmemme ihu igwe na-eme na mbara igwe n'oge.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị ihe bụ njirimara na mkpa nke satịlaịtị meteosat.
1 Ọganihu na ihu igwe
2 Uru nke meteosat satellite
3 Njirimara satịlaịtị Meteosat
Ọganihu na ihu igwe
N'ihi mgbanwe nke ụwa enwere omume na-eto eto na mkpa ịmatakwu njirimara ihu igwe nke ikuku. Ihe onyonyo enwetara site na sensọ arụnyere na nyiwe na meteosat satịlaịtị ka eji eme ihe ihe mgbochi, anya, mgbochi ọdachi na mgbake nke mpaghara ndị emetụtara by ihe omuma di iche iche di ugbu a. Anyị maara na site na mgbanwe ihu igwe ihe omume ihu igwe kachasị njọ na-abawanye ụba na ike. Nke a na - eme ka nchọpụta ihe dịpụrụ adịpụ bụrụ ngwa ọrụ dị mkpa maka nyocha na nyocha nke ihe egwu dị egwu.
Igwe meteosat satịlaịtị na-enyere aka inwe ọtụtụ onyonyo na ọkwa ụwa niile ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo nke na-enyere aka ịnakwere nsonaazụ ndị nwere ike ibute n'ihi ihe okike. Dịka ọmụmaatụ, mgbawa ugwu ugwu Icelandic Eyjafjallajokull kewara ikuku ụgbọ elu niile na ọtụtụ ebe ugwu Europe ma mee ka a kwụsị ụgbọ elu n'ọtụtụ ụwa. Nke a a na-egbochi ya site na ntinye nke ihe mmetụta dịpụrụ adịpụ site na iji satịlaịtị meteosat. Ọzọ ikpe bụ na ọ na-anọchi anya ọganihu dị ukwuu na-egbochi ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ ịbịaru nso nke cyclogenesis na-agbawa agbawa ma nye aka na ichebe akụnụba ihe na ibelata mbibi mmadụ.
Site na igwe meteosat, e mepụtala usoro ịdọ aka ná ntị oge mbụ iji dọọ aka na ntị banyere mmalite na ọdịdị nke oke ọhịa. N'ụzọ dị otú a, enwere ike ịme atụmatụ njikwa njikwa iji kwụsị ọkụ ahụ ma belata mmebi iji kpuchido gburugburu ebe obibi ka mma. Enwere ike ịme atụmatụ ọkụ ndị a site na ihe mmetụta ọhụụ nke na-enye ohere ijide ọnọdụ okpomọkụ nke ụwa.
Uru nke meteosat satellite
Site na satịlaịtị meteosat anyị nwere sistemụ nnabata ihe ọmụma mgbe a bịara n'ihe metụtara ọmụmụ ihe gburugburu ebe obibi dị iche iche etinyere na nyocha nke ihe omume metụtara ajọ ihe okike dịka oke nsogbu ikuku, umu anwuru anwuru na ikuku, oke ohia oku, wdg. Anyị ga-aghọta na igwe meteosat nwere ngwa dị ukwuu maka mgbochi na meteorology.
Iji ya, a na - agbaso usoro dị iche iche akọwapụtara ma nweta nsonaazụ nke ga - abụ mmeju maka mkpebi site n'aka ndị isi tozuru oke n'okwu metụtara gburugburu. Ọ dị oke mkpa na ọ na-enye ozi dị mkpa iji nwee ike ịkwadebe amụma ihu igwe ziri ezi, na-ebelata oke mmetụta nke ọnọdụ a na mpaghara. Enwere ike ịmata nke a site na nchọpụta nke nnukwu ebili mmiri na mgbanwe na-aga n'ihu.
Anyị nwekwara ike ịghọta ekele nke oke ugwu mgbawa nwere ike bụrụ nnukwu nsogbu zuru ụwa ọnụ ma bute ọtụtụ mfu akụ na ụba. Iji maa atụ, ọ bụrụ n’anyị ga-amata mgbasa nke ọkụ na-agbọpụ ọkụ, anyị nwere ike ịhazi melite njem ụgbọ elu na nke ala ma tinye usoro ọkọlọtọ iji hụ ọganihu igwe ojii mgbawa. Anyị nwekwara ike belata ma ọ bụ gbochie mmetọ gburugburu ebe obibi n'ihi sọlfọ dioxide ahụ nke na-adịgide na nkwusioru mgbe ọ gbawara ugwu mgbawa.
Ebumnuche ọzọ nke satịlaịtị meteosat bụ inwe ike ịnwe ọnụọgụ nyocha nke nsonaazụ ọkụ ọkụ site na mgbe ha pụtara rue mkpochapụ ha. Site na satịlaịtị a, ọ ga-ekwe omume inyocha ihe ọghọm yana ụgwọ nrụzi. Ndị ọkà mmụta sayensị bu n'obi iwepụta ihe osise ndị dị egwu nke na-eme ka ọtụtụ mgbanwe dị iche iche nwee ike ịkọwapụta ihe dị iche iche gbasara ihu igwe dị iche iche mụọ ma kwado amụma, njikwa na atụmatụ atụmatụ metụtara ụdị mmemme ọ bụla. Ka i si hụ, Ọ bara ezigbo uru ịmata ihe na-eme na mbara ụwa anyị ma lebara ya anya.
Mmepe na-adịgide adịgide na-eritekwa uru site na atụmatụ mpaghara n'ihi ekele oghe maka mgbasa nke ozi gbasara mbara igwe nke ọtụtụ nyiwe ngwanrọ na-emeghe ma na-emeghe na-akwado.
Njirimara satịlaịtị Meteosat
Ọ bụ usoro ntanetị nke geostationary na-achịkwa EUMETSAT. Enwere oghere dị na nkwụsị nke Greenwich meridian na Ecuador na-aga n'elu ugwu 35800 kilomita. N'ihi ọnọdụ nke satịlaịtị dị, ọ nwere ike ịnweta orbit yana ọsọ ntụgharị nke dabara na ntụgharị ụwa. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịhụ otu akụkụ nke ụwa a. Ọ bụ mpaghara kwekọrọ na gburugburu dị na Gulf of Guinea na nke kpuchiri ihe ruru ogo 65 nke ohere. A na-ahụ peninsula nke Iberia n'akụkụ a niile ma enwere ike ịhọrọ ya iji mụọ ọtụtụ ihu igwe nke nwere ike ịmasị anyị.
Ugbu a, anyị ga-enyocha ụzọ satịlaịtị a si arụ ọrụ. Ọ na-eji foto VIS, IR na VA kwa ọkara elekere. O nwere ike inweta onyonyo oge ọkara ọ bụla ka anyị nwee ike ịnwe ezigbo mkpebi maka inyocha ihe dị iche iche gbasara ihu igwe dịka nkesa na mgbanwe nke igwe ojii. Anyị maara na igwe ojii bụ otu n'ime akụkụ ndị dị mkpa iji mara mmalite nke oke ifufe, dịka ọmụmaatụ. Ọtụtụ onyonyo dị na ọkara awa ọ bụla n'ụdị dị iche iche electromagnetic: Visible (VIS), Thermal Infrared (IR) na Water Vapor Infrared (VA) nke dabara na ụdị sensọ atọ nke satịlaịtị na-ebu.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere satellite meteosat na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ngwaọrụ gbasara ihu igwe » Satellite meteosat
Kedu ihe bụ glacier na otu esi aha ya
Afọ na-enweghị ọkọchị